Nandrolone Propionate Raw impahla Abenzi & Abahlinzeki - Amafektri
I-Nandrolone Propionate powder ingenye ye-anabolic-androgenic steroid enamandla kakhulu etholakalayo emakethe. Isetshenziswa abakhi bomzimba nabagijimi ukwandisa ubukhulu besisindo nokuqina.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) ividiyo
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Incazelo
I-Nandrolone Propionate Raw material ingenye ye-steroids ejova kakhulu. Kuthiwa kungenzeka ukuthi i-Nandrolone Propionate Raw material ibonisa imiphumela ebalulekile ye-anabolic ngemiphumela emibi ye-androgenic. I-Nandrolone Propionate iyinhlanganisela ephumelelayo eveza izinga eliphakeme, elihlala njalo elihlala isikhathi eside, lokhu kungenxa yesigamu sempilo yomuthi (ezungeze izinsuku ezingu-8).
I-Nandrolone Propionate Raw material isetshenziselwa isifo esingapheliyo, ukushisa okukhulu, ngaphambi kokulandela ukuhlinzwa kokuphulukisa ukuphulukiswa nokuphefumula kwamathambo, ngaphambi kwesikhathi futhi kunamathele izingane, futhi ngenxa yomdlavuza wesifuba ongasebenzi kahle ongasebenzi emzimbeni wegazi uterine fibroids njll. Nandrolone Propionate Materials Raw iboniswa futhi ekwelapheni we-anemia's, i-breast carcinoma, i-angioedema yefa, i-antithrombin III yokuntuleka, i-fibrinogen ngokweqile, ukwehluleka kokukhula kanye ne-Turner's syndrome kanye ne-prophylaxis ye-angioedema yefa.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Siziqu
Igama Product Nandrolone propionate Raw material
Igama leKhemikhali 17-PROPIONATE; NANDROLONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-PROPIONATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE PROPIONATE;17-beta-hydroxyestr-4-en-3-one 17-propionate;19-NORTESTOSTERONE 17-PROPIONATE;19-NORTESTOSTERONE PROPIONATE
CAS Inombolo 7207-92-3
I-molecular Fi-ormula C21H30O3
I-molecular Weziyisishiyagalombili 330.46
IMisa ye-Monoisotopic I-330.219 g / mol
Ukuxuba Pi-oint I-55-60 °
Iphuzu lokubilisa 453.6 ° C ku-760 mmHg
I-Half Half-Life kuzungeze izinsuku ezingu-8
Color i-crystalline emhlophe
Aukuphikisana I-Nandrolone propionate Ama-Raw material asetshenziselwa isifo esingapheliyo, ukushisa okukhulu, ngaphambi kokuba ngemuva kokuhlinzwa ukuphulukana nokuphulukiswa kwe-osteoporosis, kungakabi isikhathi eside futhi kunamathele izingane, futhi ngenxa yomdlavuza webele ongasebenzi ongasebenzi kahle uterine uterine fibroids njll.
Yini i-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3)?
I-Nandro Nandrolone Propionate ingenye ye-anabolic steroids eyazi kahle esebenzisa izakhi zomzimba nabagijimi ukuze kwandiswe amandla nokuqina. Abadlali abaningi basebenzisa lesi steroid ukuze bathole ubuningi bemisipha namandla. Le steroid iningi itholakale ifomu elingenayo.
I-a19-nor anabolic androgenic. Kuye kwashintshwa kancane ukuletha ushintsho ekubunjweni kwe-testosterone. Ngamanye amazwi, ingenye yezidakamizwa ze-testosterone enomthelela omkhulu wama-anabolic kodwa isilinganiso esincane se-androgenic. Yisetshenziswa kakhulu njengoba le steroid inciphisa i-DHN ngenkathi enye i-steroid iyanciphisa i-DTH.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) isebenza
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) yayibhekwa yi-steroid eminingi enhle kakhulu yokuthi indoda isebenzise iNandro (Nandrolone Propionate Raw material) ivame ukujozwa kane noma amahlanu ngesonto. Ngalesi samba, ukuguqulwa kwe-estrogen kuyinto encane kangaka ayikho inkinga. Ukwakha umzimba, i-Nandro (Nandrolone Propionate Raw material) ingakwazi ukufakwa ngokuphumelelayo kokubili imijikelezo yokusika nokusika. Kulula esibindi futhi sikhuthaza ubukhulu obuhle namandla okuzuza ngenkathi kunciphisa amafutha omzimba.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Isilinganiso
I-Nandrolone Propionate itholakala kwifomu ejova. Yingakho kuthatha isikhathi esincane ukuxubana futhi usebenze. Kuthatha cishe ama-2 kumaviki angu-3 ukuthola. Ngakho-ke kuphakanyiswa ukuba uyeke ukuphatha i-Nandrolone Propionate i-twoto emasontweni amathathu ngaphambi komncintiswano noma umdlalo lapho ukuvivinywa kokuhlolwa kwezidakamizwa kungenzeka khona. Njengokwelashwa okudinga ukuthi isetshenziswe njenge-100 ku-200mg ngeviki ukubhekana nesifo se-anemia nezinye izifo. Abanye abagijimi basebenzisa ngisho ne-300 kuya ku-400mg ngesonto ukuthola imiphumela engcono.
I-Nandrolone Propionate Raw material (7207-92-3) Ukusebenzisa i-powder
I-Nandrolone Propionate isetshenziselwa izakhi zomzimba nabagijimi ukukhulisa amandla nokuqina. Kuboniswa futhi ekwelapheni kwe-anemia's, i-breast carcinoma, i-angioedema yefa, i-antithrombin III yokuntuleka, i-fibrinogen ngokweqile, ukuhluleka kokukhula kanye ne-Turner's syndrome kanye ne-prophylaxis ye-angioedema yefa.
Thenga izinto ze-Nandrolone Propionate Raw (7207-92-3) kusuka ku-Buyaas.com
I-Raw Nandrolone (Durabolin) powder (434-22-0)
I-Nandrolone Undecanoate powder emnyama (862-89-5)